Na njedebe MacBook Air na-adị ndụ karịa afọ ole na ole | Esi m mac
Mgbe anyị mere nyocha ahụ na May 25, nke anyị jụrụ ma Apple ọ kwesịrị wepu MacBook Ikuku site na katalọgụ ngwaahịa ya, "Mba" nwetara ọtụtụ vootu 154. O doro anya na ndị ọrụ ka chọrọ MacBook Air dị ka nhọrọ ịzụta na nke Apple a na-ahụ maka ahịa, nke mere na ọ bụghị naanị na ewepụghị ya na katalọgụ ya taa, kamakwa emelitere ya. Ọ bụ n'ezie ihe mmelite nke ekwupụtalarị na asịrị na na njedebe abụrụla eze ijide ìgwè ndị ahụ ma ọ dịkarịa ala otu afọ ọzọ.
Ndozigharị dị ntakịrị mana ọ dị mkpa. Ihe nhazi kọmputa ahụ ka mma na ihe ọ bụla ọzọ, na-esite na 5 GHz Intel i1,6 base processor (na mgbakwunye Turbo na 2,7 GHz) na ihe nhazi ọhụrụ ahụ. 5GHz Intel Kaby Lake i1,8 (Turbo Boost 2,9GHz) nwere nhọrọ iji gbagoo Intel Core i7 dual-core na 2,2 GHz (Turbo Boost ruo 3,2 GHz) na ebe nchekwa 4 MB. Na mgbanwe a, gbakwunyere na 8 GB nke RAM na nhọrọ dị iche iche nke 128 GB, 256 ma ọ bụ 512 GB PCIe SSD ikike, nke onye ọhụụ a MacBook Air nwere, ọ na-anọgide na katalọgụ.
Apple nwere nnukwu uru na akụrụngwa a n'agbanyeghị eziokwu ahụ ọnụahịa ya ogologo oge, emetụbeghị aka na mmezigharị ikpeazụ a, na-edozi maka isi nlereanya na 1.099 euro. Obi abụọ adịghị ya, arụmọrụ nke MacBook Air ga-emeziwanye ugbu a na ihe nhazi ọhụrụ ahụ ma n'ezie, ha na-aga n'ihu na-arụ ụka oge 12 nnwere onwe na otu ụgwọ na weebụ. Yabụ ndị chọrọ MacBook Air taa, nwere ike ịga n'ihu na-azụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » MacBook Ikuku » Na njedebe MacBook Air na-adị ndụ afọ ole na ole
Ndị a bụ Mac dakọtara na ọhụrụ macOS High Sierra